चितवनमा पार्टी एकताबिरोधी भन्दै पाण्डेविरुद्ध ओली पक्षको नाराबाजी ! « MNTVONLINE.COM
चितवनमा पार्टी एकताबिरोधी भन्दै पाण्डेविरुद्ध ओली पक्षको नाराबाजी !
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेविरुद्ध पार्टी एकताबिरोधी भन्दै गृहनगरकै कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गरेका छन् । शनिबार चितवनको राप्ती नगर कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले माधव नेपाल पक्षका नेता तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेविरूद्ध नाराजुलुस गरेका हुन् । बैठक विथोल्ने प्रयास गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।
राप्ती नगरपालिकाको विरेन्द्रनगरमा गरिएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पुगेका पाण्डेलाई ओली समर्थित कार्यकर्ताले पार्टी एकताबिरोधी भन्दै लखेट्ने प्रयास गरेका थिए । उनीहरूले पार्टी एकता जिन्दावाद, पार्टी फुटाल्न पाइँदैनलगायतका नारा लगाएका थिए । पाण्डेले मदन भण्डारी फाउण्डेशनमार्फत गुटबन्दी भएको बताएपछि ओली समर्थित कार्यकर्ताहरू नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।
नगर कमिटीको आधिकारिक भेलामा अन्य ठाउँका कार्यकर्ताहरू आएर बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोप पाण्डे समर्थित कार्यकर्ताहरूले लगाएका छन् । पाण्डे चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । कार्यक्रम भएको स्थान उनको निजी निवासबाट नजिकै पर्छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको ‘काउन्टर’ रणनीतिः प्रस्ताव र पत्र प्रदेशमा पठाइँदै !
‘सत्ता साझेदारीको विषयमा छलफल भएको छैन’ !
बाइडेनको कार्यकालमा एन्टोनी ब्लिन्केन अमेरिकी विदेशमन्त्री बन्ने सम्भावना
चिनियाँ राजदूत यान्छी र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबिच भेटवार्ता